भ्यालेन्टाईन डे मा शरिर कि प्रेम ??? - OneZero News
रातीको ११ बज्नै लागेको थियो, म दिनभरीको अफिसको कामको थाकाईले निदाउनै लागेको थिएँ । झट्पट् एउटा आवाज कानमा प¥यो, ‘बेबी भ्यालेन्टाईन डे का दिन हामी कहाँ भेट्ने ?’ एउटा २०÷२१ बर्षको जस्तो लाग्ने केटाको आवाज थियो त्यो । उताबाट मधुरो स्वरमा जवाफ सुनियो ‘उम खोई बजार तिर कतै भटौँ न, बसेर ब्रेकफास्ट गरौँ ।’
सोचेँ, अर्काको व्यक्तिगत जिवनका कुराहरु के कान थापेर सुन्नु , फेरी मनले मानेन । मनमा झन उत्सुकता बढ्न थाल्यो । फेरी केटाको आवाज सुनियो ‘हे त्यसरी हुन्न के, दिउँसो तिर भेटौला, अस्ति हामीले कुरा गरेको ठाउँतिर घुमौँला, फोटो खिचौँला अनि बेलुका कुनै होटल तिर बसौँ न ।’
‘नाई, घरमा कसरी कुरा मिलाउनु ??? राती त कतै हिड्न दिँदैनन् ।’ केटीको कडा जवाफ आयो ।’ मेरो मनमा भने अझै उत्सुकता र कौतुहलता बढ्दै जान थाल्यो । कान ठाडा ठाडा भए । यताबाट केटा बिस्तारै बोल्यो ‘मिलाउन के त्यति, साथीकोमा बर्थ डे छ भन्दा भैहाल्यो नी ।’ उसले फकाउने शैलीमा भन्यो ।
उताबाट मधुरो स्वरमा जवाफ आयो ‘राती त दिँदैनन् होला, त्यहि पनि मिलाउने कोशिस गर्छु, राती आउन दिएनन् भने नरिसाउनु ल ?’ केटाले जवाफ फर्कायो ‘सकेसम्म मिलाउन, झन भ्यालेन्टाईन डे मा भेटेर अबिष्मरणिय क्षण बनाउँ भनेको, उसलाई चाहिँ केहि मतलब छैन ।’ केटा केहि आक्रोश सहितको भावमा बोल्यो । ‘अब घरबाट दिदैनन् त के गर्नु त ? माया त म पनि गर्छु नी तपाईलाई ।’ केटिको जवाफ आयो । केटाले फकाउँदै भन्यो ‘सकेसम्म मिलाउन, नत्र दिउँसो मेरो कोठामा आउन त ।’
केटीको केहि चर्को स्वर सुनियो ‘किन नी तपाईको कोठा चाहिँ, बाहिर भेटे हुन्न र ?’ केटा कड्किियो ‘भो भो भेट्नुपर्दैन मलाई, तिम्रो आखिर म को रहेछु र ? मैले मात्रै रहेछ तिम्लाई माया गर्ने, तिम्लाई त के वास्ता मेरो ?
केहि समयसम्म केटीको जवाफ आएन वा मैले सुनिन । तर मेरा कान अझै तिखा हुन थाले । केहि समयपछि केटिको मधुर स्वरमा जवाफ सुनियो ‘ ल ल हुन्छ, म आउँछु ।’ मसिनो स्वरमा उनीहरुको कुरा हुँदै थियो । मलाई भने निन्द्राले च्यापो, निदाएँ ।
ति मध्येको एउटाले भन्यो ‘ओई केटा यसपाली प्रपोज डेमा कति जना केटीहरुलाई प्रपोज गरिस ?’ पहेँलो टिसर्ट लगाउने केटा एकछिन मज्जाले हाँस्यो अनि हाँस्दै जवाफ दियो ‘१५÷२० वटीलाई प्रपोज गरेको ८ जनाले मात्रै ‘एक्सेप्ट’ गरे यार ।
प्रश्न सोध्ने केटाले फेरी प्रश्न ग¥यो ‘अनि यतिका धेरै केटीहरुलाई कसरी ‘म्यानेज’ गर्छस त ??’ त्यो केटाले निकै फुर्तिका साथ जवाफ दियो ‘अब हेर २÷३ वटा सिमकार्ड छन्, मिलाई मिलाई कल गर्छु । त्यसै गरी मिलाएर भेट्छु । फेसबुक आईडी पनि ४ वटा छन् । अब तिनिहरु सबैलाई बिहे गर्ने हैन क्यारे, टाईम पास त हो नी ।’ त्यो केटाले आफ्नो शब्द सक्न नपाउँदै मेरो नवौँ गाँसको रुपमा भित्रन लागेको ममको डल्लो मुखबाट उछिट्एर फुत्त बाहिर निस्कियो । म अक्क न बक्क भएँ । ति केटाहरु भने मलाई देखेर मरी मरी हाँसे एकछिन सम्म । मेरो दृश्यलाई लिएर त्यसरी हाँसेपछि झनक्क रिस उठ्यो मलाई । मैले सोधेको ‘किन हाँसेको भाईहरु ??’